स्वास्थ्य/ जीबन शैली – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौँ । यदी तपाई स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउन सुरु गर्नुहोस्। यसले तपाईको ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, उर्जामा सुधार, मोटोपन जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याबाट छुटकारा दिने गर्दछ। बिरे नुनमा ८० खनिज र जीवनका लागि चाहिने सबै आवश्यक प्राकृतिक तत्व पाइने गर्दछ। पानी बनाउने विधि एक गिलास हल्का तातो पानीमा एक तिहाई बिरे नुन मिलाउनुहोस्। त्यसपछि यसलाई प्लास्टिकको ढंक्कनले ढाकिदिनुहोस्। त्यसपछि गिलासको नुन घोल्नका लागि ३४ घण्टाका लागि छोडिदिनुहोस्।त्यसपछि बिरेनुनको टुक्रा पानीमा घोलियो की खोलिएन हेर्नुहोस्। त्यसपछि पनि फेरि बिरे नुन थोरै मिलाएर त्यो पानी पिउनुहोस्। यस्ता छन् फाइदा पाचन प्रणालीमा सुधार बिरे नुनको पानीले मुखमा आएको लारवाला ग्रन्थिलाई सक्रिय रहन मद्दत गर्दछ। राम्रो पाचनका लागि यो पहिलो कदम निकै जरुरी हुन्छ। पेटभित्र प्राकृतिक
काठमाडौं । मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने गुर्जो नेपालका जहाँसुकै रोप्न सकिने अमूल्य जडिबुटी हो । नेपालमा धेरै ठाउँमा घर वरिपरि वा गमलामा रोपेर नियमित प्रयोग गर्न सकिने लहरे जडिबुटी गुर्जो, यसले अमृत समान काम गर्दछ भनिन्छ । यसको लहरा लामो समयसम्म सुक्दैन । यसको प्रयोग गर्दा मात्रा मिलाएर खान नसक्दा शरीरलाई बेफाईदा गर्छ । कस्ता मानिसले सेवन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । गुर्जो सेवन गर्ने विधि १. ताजा गुर्जोको लहरा १० देखि २० ग्राम सिलौटो, खल वा मिक्स्चरमा पिसेर पानी राखी उमाल्ने आवश्यकता अनुसार अन्य जडिबुटी तथा मसला पनि संगै उमाली रस छान्ने । त्यसपछि १ चम्चा मह वा मिश्री मिलाएर नियमित विहान पिउने । २. सामान्य अवस्थाको रोगी वा निरोगी व्यक्तिले तल दिइएको विभि अनुसार गुर्जोको सेवन गर्न सकिन्छ । तर व्यक्तिको उमेर र रोगको अवस्था अनुसार फरक मात्रा र विधिबाट प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामा अस्पतालमा उपचार गराइ रहेका छन् । उनले कोरोनालाई हल्का रुपमा नलिन र आफ्नो सुरक्षामा नचुक्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। स्टार अस्पतालमा उपचाररत लामाले एक भिडियो सन्देशमार्फत सबैलाई सो आग्रह गरेका लामाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो स्वास्थय अपडेट गर्नुका साथै सबैलाई सचेत रहने समेत आग्रह गरिरहेका छन्। आज बिहानै क्याप्टेन विजय लामाले आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्: "पिपिइ मा सबै एकै देखिन्छन। अस्पतालमा भर्ना भएको करिब १० दिन बितिसक्दा पनि कसैलाइ चिन्न सकेको छैन! यो कोविडको कहरमा यस्तै हुदो रहेछ!! बिहानको समय। वहाहरु सबैले कष्ट सहेर, ज्यान बाजिमा लगाएर हामी जस्ता संक्रमणमा परेकालाइ नया जीवन दिन लाई अहोरात्र खटिएर सेवा पुर्याउनु भएका छन! घर जान पाउनु हुन्न, दिनमा १२ घन्टाको duty हुन्छ..ppe दुई चोटि मात्र फेर्न पाउँछन्!
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामाले कोरोनालाई हल्का रुपमा नलिन र आफ्नो सुरक्षामा नचुक्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। स्टार अस्पतालमा उपचाररत लामाले एक भिडियो सन्देशमार्फत सबैलाई सो आग्रह गरेका हुन् । क्याप्टेन लामाले आफ्नो स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भैरहेको जानकारी दिँदै कोरोना लाग्दैमा भने नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्ः ‘मलाई कोरोनाले यति सिरियस पार्ला भन्ने लागेको थिएन तर चिकित्सकहरुको रिपोर्ट हेर्दा मेरो केस सिरियस रहेछ । म एकदमै कन्सेस भएको बेलामा त यति धेरै गाँजेको छ भने यसलाई सामान्य रुपमा लिने मेरो मित्रहरुलाई ख्याल ख्याल नगरिदिन आग्रह गर्दछु ।’ उनले जीवन रहे मात्र सबैथोक रहने भएकोले यस्तो केसलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताएका छन् । क्याप्टेन लामाले आफु छिट्टै निको भएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने र राष्ट्रप्रति समर्पित हुन
घरेलु औषधि विरेनुनले रोग निको पार्छ : यस्ता छन् फाइदा
काठमाण्डौ- बिरेनुनको नियमित सेवनले बाथ, पित्त र कफलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ । यसमा सोडियमको मात्रा कम हुने भएकाले उच्च रक्तचापका बिरामीलाई पनि लाभदायक हुन्छ । बिरेनुनले पेटमा भएका विषाक्त तत्वलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । जसले गर्दा ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अम्लीयपन लगायत समस्याबाट छुटकारा मिल्छ । बिरेनुनमा प्रशस्त मात्रामा सल्फर, आइरन लगायत शरीरलाई आवश्यक खनिज तत्व हुन्छन् । जसका कारण मोटोपना, खराब कोलस्ट्रोल, (श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट बचाउने काम गर्छ । यसले धातुबाट हुने असरबाट समेत बचाउँछ । त्यस्तै, छालालाई नरम, स्वस्थ, सुन्दर राख्न पनि मद्दत गर्छ । यसको सेवनले कुष्ठरोग, दाद वा छालासम्बन्धी रोगबाट समेत टाढा रहन सकिन्छ । त्यस्तै, मनतातो पानीमा प्राकृतिक बिरेनुनको मिश्रण गरी नुहाएमा शरीरमा लाभ मिल्छ ।
काठमाण्डौ । घरको मूल मान्छे भनेर खासमा हामी कसलाई चिन्छौ, सबलाई थाहा छ बाबालाई तर हरेक घरमा यस्तो कहा हुन्छ र अनि अर्को कुरा जब घरको मूल मान्छे मानिने आमानै अकालमा मृ,त्युको मुखमा पुगेर सबै परिबार र बलाबच्चालाई छोडेर जान्छिन भने त्यो जतिकै दुख अरु के नै हुन्छ र रु आज हामी कुरा गर्दैछौ काठमाडौ डेरामा बस्ने माझी परिबारको जहा सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाएपछि बिचरा यि २ महिने छोराको बिजोग अवस्था भएको छ । न त दूधनै खान पाए आमाको न त मायानै, तर त्यही प्रसंगमा यिनी बाबुको लागि भगबान हुन यिनकी ४ बर्षिय दिदी शितल माझी जो भाईको लागि यति सानो उमेरमा घरका सबै कामदेखि लिएर यिनको पूरा स्याहार सुसार गर्छिन । यो उमेरमा अरुका छोराछोरीहरु खेल्नमा रमाउछन भने यि नानी भाईको दिसापिसाबदेखि दूध चुसाउने सबै काममा लागि पर्छिन र भाईलाई प्राण भन्दा पनि धेरै माया गर्छिन । हेर्नुहोस यो कारुणीक भिडियो —
काठमाडौं । प्र’तिबन्धित पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का छोरा प्रकाश चन्द डाक्टर बनेका छन् । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हालै लिएको परीक्षा उत्तिर्ण गरेका हुन् । चन्दलाई गत मंसिरमा काउन्सिलले लिएको परीक्षामा सहभागी हुनबाट ब’ञ्तित गरिएका थिए । मेडिकल माफियावि’रुद्ध डा. चन्दले सं’घर्ष र आ’न्दोलनको ने’तृत्व गरेका थिए । चन्दले काउन्सिलको परीक्षा पास गरेपछि उनलाई मान्यता थापाले ब’धाई र शुभकामना दिएकी छिन् ।उनले सामाजिक फेशबुकमार्फत प्रकाशलाई ब’धाई दिएकी छिन्। उनले लेखेकी छन – ”मङ्सिर मा मेडिकल मा’फिया बि’रुद्ध को स’ङ्घर्ष र मा’फिया ले रचेको पे’स्तोल ष’डयन्त्र का कारण NMC license exam दिन नपाएर अहिले कोरोना को अ’न्यौलग्रस्त स्थिति मा भएकोे ऊक्त परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु भएको मा डा.प्रकाश चन्द लाई हार्दिक बधाई अनि धेरै धेरै शुभकामना । पढाई र सं’घर्षलाई अनुशासित ढं’गले
काठमाडौं, अदुवा सर्वप्रथम चीनमा प्रयोग भएको थियो । यसलाई परम्परागत र वैकल्पिक औ’षधीको रुपमा प्रयोग भएका लामो इतिहास छ । अदुवालाई ताजा, सुकेको, धुलो वा जुस र तेल जुनसुकै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले पाचन श’क्ति बढाउनुका साथै वाकवाकीलाई रो’क्ने रुघाखोकी लाग्ने स’मस्याबाट बचाउँछ । अदुवालाई अंग्रेजीमा जी’न्जर भनिन्छ । हाम्रो भान्छामा नछुट्ने र औ’षधीको गुण भएको अदुवाका फाईदाबारे पक्कै पनि थाहा पाउनुभएकै होला ।अदुवाको प्रयोगबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै फाईदाहरु पुग्छ । रुघाखोकी लाग्दा, द’म र गहिरो खोकीमा , चिसोका कारण भएको बाथ र कम्मर दु’खेमा, बान्ता भएमा , ज्वरो आएको बेला पेटमा ग्यास भरिएको अवसथमा सास ग’नाउने स’मस्या भएकोमा, भोक नलागेमा वा पेट सफा नभएमा अदुवाको प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले यस्ता केहि स’मस्या हुनेहरुले अदुवाको प्रयोग गर्न नहुने चिकित्सकको भनाई छ। १ . अदुवा धेरै से’वन गर्दा